चिनियाँ लगानी आमन्त्रण गर्नुपर्छ, तर ऋणमा रेल बनाउनु हुँदैन् : डा. महत – newslinesnepal
चिनियाँ लगानी आमन्त्रण गर्नुपर्छ, तर ऋणमा रेल बनाउनु हुँदैन् : डा. महत
प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०७६, बुधबार १८:०१
महतले चीनको एक चीन नीतिको चासोमा नेपाल सधैं प्रतिबद्ध रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘नेपालको भूमी कसैको खिलाफमा पनि प्रयोग हुन दिँदैनौं । नेपाल यसप्रति सजग छ । हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा र आपसी हितको आधारमा अघि बढ्छौं ।’ चीनसँग सरकारले सुपुर्दुगी सन्धी गर्न लागेको छ भनेर बाहिर चर्चा छ नि भनेर सोधिएको एक प्रश्नमा उनले भने,‘यसबारेमा नेपालले थप छलफल गर्नुपर्छ । यसबारेमा समान दृष्टिकोण हुनुपर्छ